Yohane 17 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yohane Kyerɛwtohɔ 17:1-26
Mpae a etwa to a Yesu ne n’asomafo no bɔe (1-26)
Sɛ obi benya daa nkwa a, ɛsɛ sɛ ohu wo a woyɛ nokware Nyankopɔn no (3)
Kristofo nka wiase no ho (14-16)
“W’asɛm yɛ nokware” (17)
“Mama wɔahu wo din” (26)
17 Bere a Yesu kaa eyinom no, ɔmaa n’ani so kyerɛɛ soro, na ɔkae sɛ: “Agya, bere no aso. Hyɛ wo ba no anuonyam, na wo ba no nso nhyɛ wo anuonyam,+ 2 efisɛ woama no ɔhonam* nyinaa so tumi,+ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛma wɔn a wode wɔn ama no no nyinaa daa nkwa.+ 3 Sɛ obi benya daa nkwa+ a, ɛsɛ sɛ ohu wo a woyɛ nokware Nyankopɔn koro pɛ+ no, na ohu Yesu Kristo+ a wosomaa no no nso. 4 Adwuma a wode ama me sɛ menyɛ no, mayɛ awie de ahyɛ wo anuonyam wɔ asaase so.+ 5 Enti afei, Agya, anuonyam a na mewɔ wɔ wo nkyɛn ansa na wiase reba no, san fa ma me wɔ wo nkyɛn.+ 6 “Nnipa a wuyii wɔn fii wiase maa me no, mama wɔahu wo din.*+ Ná wɔyɛ wo dea, ɛnna wode wɔn maa me, na wɔatie w’asɛm.* 7 Afei wɔabehu sɛ nneɛma a wode maa me nyinaa fi wo nkyɛn; 8 efisɛ nsɛm a wode maa me no, mede ama wɔn,+ na wɔagye atom, na wɔabehu ampa sɛ mebae sɛ wo nanmusini,+ na wɔagye adi sɛ wo na wosomaa me.+ 9 Mesrɛ ma wɔn; mensrɛ mma wiase no, na mmom mesrɛ ma wɔn a wode wɔn ama me no, efisɛ wɔyɛ wo dea; 10 na biribiara a mewɔ no yɛ wo dea, na wo nso wo de yɛ me dea,+ na manya anuonyam wɔ wɔn mu. 11 “Minni wiase bio, na wɔn de, wɔwɔ wiase,+ na mereba wo nkyɛn. Agya Kronkron, wo ara wo din a wode ama me nti, hwɛ wɔn so+ sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛyɛ baako* sɛnea yɛn nso yɛyɛ baako*+ no. 12 Bere a mewɔ wɔn nkyɛn no, na mehwɛ wɔn so+ esiane wo ara wo din a wode ama me nti; na mabɔ wɔn ho ban, na wɔn mu baako mpo nsɛee+ gye ɔsɛe ba no,+ sɛnea ɛbɛyɛ a kyerɛwsɛm no bɛba mu.+ 13 Nanso seesei mereba wo nkyɛn, na mereka eyinom wɔ wiase, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso benya anigye a mewɔ no bi pɛpɛɛpɛ.+ 14 Mede w’asɛm ama wɔn. Na wiase no tan wɔn, efisɛ wɔnka wiase no ho+ sɛnea me nso menka wiase no ho no. 15 “Mensrɛ sɛ yi wɔn fi wiase, na mmom mesrɛ sɛ hwɛ wɔn so esiane ɔbɔnefo no nti.+ 16 Wɔnka wiase no ho,+ sɛnea me nso menka wiase no ho no.+ 17 Fa nokware no tew wɔn ho;*+ w’asɛm yɛ nokware.+ 18 Sɛnea wosomaa me baa wiase no, me nso mesomaa wɔn wiase.+ 19 Wɔn nti, meretew me ho,* sɛnea ɛbɛyɛ a nokware no bɛma wɔn nso ho atew.* 20 “Ɛnyɛ eyinom nko ara nti na meresrɛ, na mmom meresrɛ ama obiara a ɔnam wɔn asɛm so gye me di no, 21 sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nyinaa bɛyɛ baako,+ sɛnea wo, Agya, wo ne me yɛ baako na me nso me ne wo yɛ baako+ no, na wɔn nso ne yɛn ayɛ baako, sɛnea ɛbɛyɛ a wiase no begye adi sɛ wo na wosomaa me. 22 Mede anuonyam a wode ama me no ama wɔn, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛyɛ baako sɛnea yɛn nso yɛyɛ baako no.+ 23 Me ne wɔn yɛ baako, na wo nso wo ne me yɛ baako, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛyɛ baako korakora,* na ama wiase no ahu sɛ wo na wosomaa me, na wodɔ wɔn sɛnea wodɔ me no. 24 Agya, wɔn a wode wɔn ama me no, mepɛ sɛ wɔbɛka me ho wɔ baabi a mewɔ no,+ sɛnea ɛbɛyɛ a wobehu anuonyam a wode ama me no, efisɛ na wodɔ me ansa na wɔrehyɛ wiase ase.*+ 25 Trenee Agya, wiase no nnim wo;+ nanso me de, minim wo,+ na eyinom abehu sɛ wo na wosomaa me. 26 Mama wɔahu wo din na mɛma wɔahu,+ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔdɔ a wode dɔɔ me no bɛtena wɔn mu, na me ne wɔn ayɛ baako.”+
^ Anaa “adasamma; nnipa.”
^ Anaa “mada wo din adi akyerɛ wɔn.”
^ Anaa “wɔadi w’asɛm so.”
^ Anaa “wobenya adwenkoro.”
^ Anaa “yɛwɔ adwenkoro.”
^ Anaa “Fa nokware no yɛ wɔn kronkron.”
^ Anaa “mereyɛ me ho kronkron.”
^ Anaa “bɛma wɔn nso ayɛ kronkron.”
^ Anaa “wɔn baakoyɛ bewie pɛyɛ.”